Nomen’i Madagasikara lesona i Afrika: nahazo ny tsodran’ireo filoha teo aloha ny filoha Rajoelina | NewsMada
Nomen’i Madagasikara lesona i Afrika: nahazo ny tsodran’ireo filoha teo aloha ny filoha Rajoelina
Sambany eo amin’ny tantaran’i Madagasikara ary tsy fahita taty Afrika aza. Niarahaba sy nirary soa ho an’i “Zandry kely” ireo filoha telo teo aloha. Samy nanotrona ny fianianan’ny filoha Rajoelina tetsy Mahamasina avokoa izy ireo. Anisan’izany ny amiraly Ratsiraka. “Tsy olona ny olana fa ny fikarakarana ny fifidianana. Misy lesoka tokony harenina ao. Ilaina ny fifankatiavana sy fihavanana raha te handroso. Efa zava-dehibe izao fifanotronana izao ka tokony hotohizana”, hoy izy. Tsy mifanalavitra amin’izany ny nambaran-dRavalomanana Marc. “Mila mijery ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy isika. Ilaina ny miray hina… Tsy mbola fotoana hitenanana na ho lehiben’ny mpanohitra izao na tsia”, hoy izy. Nirary soa ho an’ny filoha vaovao koa Rajaonarimampianina. Samy kandidà nifaninana tamin’ny mpanorina ny IEM avokoa, izy ireo. Nankasitraka ny fanotronana ny filoha Rajoelina.
Mifanotrona ny samy Amerikanina
Efa tsy mifanalavitra amin’ny fihetsik’ireo filoham-panjakana amerikanina amin’ny fifanotronana rehefa zava-dehibe eo amin’ny firenena ny nitranga tetsy Mahamasina. Mametraka mazava fa i “Etazonia sy ny Amerikanina” aloha. Tsy izany ihany anefa fa teo koa ireo filohan’ny FFKM efatra mirahalahy sy ireo mpitondra teo aloha rehetra nanana andraikitra ambony teto amin’ny firenena. Ny avy amin’ny iraisam-pirenena, nahitana solontena avy amin’ny firenena 35. Filoham-panjakana am-perinasa sy ny teo aloha, ny filoha lefitra, ny mpandraharaha marobe avy any ivelany. Ankoatra ireo ny avy amin’ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika.
Feno ny fepetra ho any amin’ny fampandrosoana
Tsy mba tahaka iny niseho teny Mahamasina iny ny any Afrika rehefa aorian’ny fifidianana. Korontana sy ra mandriaka ary faty olona matetika. Midika izany fa feno tanteraka ny fepetra ho amin’ny fampandrosoana satria efa eken’izao tontolo izao sy ny ato anatiny miaraka amin’ny vahoaka malagasy ny mpitondra vaovao.